'रानी ऐश्वर्य 'नो' सुन्नै नसक्ने' :: Setopati
अमृता लम्साल काठमाडौं, असोज १
'बुबाले आफ्ना दिदीबहिनीले पाएको दुःख देखेर हामीलाई पढाउनुभयो। उहाँप्रति म कृतज्ञ छु,' तुला राणा आफ्नो सफलताको श्रेय बुबा भूपेन्द्रविक्रम शाहलाई दिन्छिन्। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
'छोरी पढायो भने पोइल जान्छे।'
तुला राणाले समाजको यो मान्यता तोडेर पढिनन् मात्र, भारतसम्म पुगेर स्नातक गरिन्।
तुलाको जन्म बिक्रम सम्बत् १९९३ मा पाल्पाको तानसेनमा भएको हो। राजधानीबाहिर जन्मे-हुर्के पनि तुला 'बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय' मा स्नातक पढ्न गइन्।
मलाई अचम्म लाग्यो। त्यो बेलाको समाजमा उनले कसरी भारत गएर पढ्ने मौका पाइन्! कुराकानी यहीँबाट सुरु गरेँ।
'मेरो बुबाले गर्दा। उहाँका दिदीबहिनीले पाएको दुःख देखेर हामीलाई पढाउनुभएको हो,' ८२ वर्षीया तुलाले आफ्ना बुबाप्रति कृतज्ञ हुँदै भनिन्।
उनका बुबा भूपेन्द्रविक्रम शाह र आमा विष्णुकुमारी शाह हुन्। भुपेन्द्रविक्रमका ८ जना दिदीबहिनी रहेछन्। सबैको पहाडतिर विवाह भएको।
'मेरो जिजुबाजे आरुखर्कको राजा हुनुहुन्थ्यो। फुपूहरूको बिहे पनि राजारजौटासँगै भएको थियो। त्यो बेला ठकुरीबाहेक कोहीसँग जात मिल्थेन,' तुलाले भनिन्, 'राजाका छोरी-बुहारी भएर पनि फुपूहरूलाई दुःख भयो। खेतीपाती। बारीको काम। ढिकी कुट्नुपर्ने। जाँतो पिस्नुपर्ने। भन्नलाई मात्र राजारजौटा। पहाडका ठकुरीहरूसँग धेरै सम्पत्ति थिएन। माइतमा सहज थियो उहाँहरूलाई। बिहे गरेपछि दुःख पाउनुभो।'
तुलाका फुपूहरू माइत आउँदा डोकोभरि 'पाहुर'(कोसेली) लिएर आउँथे। त्यसमा रोटी-झिनिया हालिन्थ्यो। चाडपर्वमा माइत आउँदा दुःख भयो भन्दै खुब रुन्थे। राजाका सन्तानसँग बिहे गरेका दिदीबहिनीको त्यस्तो हाल देखेर तुलाका बुबा भूपेन्द्रलाई नराम्रो लागेछ।
'आफ्ना छोरीको पनि भोलि दिदीबहिनीकै जस्तो विजोग हुन्छ भनेर बुबाले हामीलाई पढाउन सुरु गर्नुभयो। बुबाको त्यस्तो माया र प्रयास नभएको भए आज म यहाँ हुन्न थिएँ,' तुलाले भनिन्।
'मास्टर भारतीय हुनुन्थ्यो।'नमस्ते करो!' भन्नुहुन्थ्यो। कसरी गर्न थाहै थिएन। दुई-तीन सिकेपछि बल्ल हात जोडेर नमस्ते भन्न आयो,' आफ्नो पढाइ अनुभव सुनाउँदै तुला। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
भूपेन्द्र आफैं पनि आइएसम्म पढेका थिए। गोरखपुरमा पढेर आएका उनी राजनीतिक जानकारी पनि राख्थे।
'अनि तपाईं जन्मिएको ठाउँमा स्कुल थियो त? कसरी पढ्नुभो?'
'मेरा पालामा पाल्पामा एउटा प्राथमिक स्कुलधरि थिएन। न केटाका लागि, न केटीका लागि। पद्मशमशेर महाराज भएपछि २००४ सालमा बल्ल एउटा प्राथमिक स्कुल खुल्यो। त्यो पनि केवल केटाहरूका लागि।'
उनका दाइभाइ त्यसैमा पढ्न थाले। तुलाका लागि भने बुबाले अर्कै व्यवस्था गरे। पाल्पामा अलि पढेलेखेका 'भारतीय मास्टर' थिए। मेट्रिक पास (त्यो बेला एसएलसी सरह) भएको तुलाको अनुमान छ।
'त्यही मास्टरले हामीलाई पढाउनुभयो। हामी एउटा 'फस्ट बुक' पढ्थ्यौं। त्यो के नामको हो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन। सिएटी क्याट, क्याट माने बिरालो, आरएटी र्‍याट, र्‍याट माने मुसा भन्दै पढ्थ्यौं। अंग्रेजी सुरु गर्ने त्यो किताबलाई फस्ट बुक भन्थ्यौं। लामो समय त्यही किताब पढ्यौं,' तुलाले आफ्नो अध्ययन सुरूआतको अनुभव सुनाइन्।
तुला ११/१२ वर्ष भएपछि मास्टरकहाँ जान पाइनन्। छोरीचेली ११/१२ उमेर भएपछि बाहिर हिँडडुल गर्नु राम्रो मान्थेनन्। तै उनको पढाइमा वाधा भएन। उनका बुबाले घरमै पढाउने उपाय भेटे।
उनीहरूको घरमा तरुलता रायमाझीकी कान्छी आमा बस्थिन्। तरुलता केशरबहादुर रायमाझीकी श्रीमती हुन्।
'तरुलताकी कान्छी आमाको नाम थाहा भएन। थर भट्टराई हो। उहाँ पाल्पा आउनुभएको थियो,' तुलाले भनिन्, 'किन आउनुभयो थाहा छैन। तर उहाँलाई बुबाले घरमै बोलाउनुभयो। हामीलाई पढाउन भनेर। उहाँ भारतीय हुनुन्थ्यो। 'नमस्ते करो' भन्नुहुन्थ्यो।'
तुलालाई नमस्ते गर्न आएनछ। सोधिछन्, 'नमस्ते कसरी गर्ने मास्टर साब?'
'यसरी' भन्दै दुवै हात जोडेर सिकाएपछि दुई-तीन दिनमा बल्ल उनीहरूले 'मास्टर साब नमस्ते' भन्न जानेछन्।
तुलाले केही समय उनैसँग पढिन्।
'अमेरिका जान पाइन्छ भनेर ०१५ सालमा अमेरिकी सहयोग नियोग युएसएडको परियोजनामा काम गरेँ। पछि २०३४ सालमा नारी सामाजिक सेवा सम्बन्धी परिषदमा काम गरें,' उनी आफ्ना काम अनुभव सुनाउँछिन्,'रानी ऐश्वर्यसँग ८ वर्ष काम गरेँ।' तस्बिरः तुलाको पारिवारिक संकलन।
त्यसपछि कांग्रेस आन्दोलन सुरु भयो। उनका बुबा कांग्रेसमा संलग्न रहेछन्।
'बुबा पार्टीमा लागेको हामीलाई के थाहा र! पछि मात्र थाहा पायौं,' तुलाले भनिन्, 'उहाँलाई बिपी कोइराला, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई सबैले चिन्थे। सूर्यप्रसाद र बुबाको सम्बन्ध अझै राम्रो थियो।'
यस्तो परिस्थितिमा तुलाका बुबा भूपेन्द्र जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्थे। परिवारमा पनि समस्या आइपर्न सक्थ्यो।
उनले परिवारलाई समस्याबाट जोगाउन चलाखी गरेको तुला सम्झिन्छिन्।
'आमा, म, दुई भाइ, दुई बहिनीलाई बुबाले बनारस लगेर दूधविनायकमा गुर्जूहरू (दरबारमा गुरूको कार्यसम्पादन गर्ने व्यक्तिहरू) को कोठीमा राखिदिनुभयो। गुर्जूहरू धनी थिए। धेरै वर्ष त्यहीँ बस्यौं। त्यहीँबाट एसएलसी पास गरेँ। आइए र बिए बनारस युनिभर्सिटीबाट गरेँ। त्यसपछि म पहिलोपटक काठमाडौं अाएँ।'
बिसं २०१३ सालतिर।
'छोरी पढाए पोइल जान्छ भन्थे त्यो बेला,' तुलाले भनिन्, 'मैले भने बनारसमा बिएसम्म पढ्न पाएँ।'
बुबा भूपेन्द्रले तुलालाई कोठाको अँध्यारो कुनामा लुक्न भनेनन्। न बाँधेरै राखे। बरु नतोकिएको आकाशको सीमा र परिधिबाट मुक्त बनाएर शिक्षाको उज्यालोमा रमाउन दिए। सपनाको संसार बसाउन छाडिदिए।
यसैको फल थियो, काठमाडौं आएको एक वर्षमै उनलाई जागिरको प्रस्ताव आयो।
२०१४ सालमा जागिर प्रस्ताव! त्यो पनि पहिलोपटक काठमाडौं आएकी महिलालाई! यो मेरो लागि अर्को आश्चर्य थियो।
मेरो आश्चर्य मेटाउँदै तुलाले भनिन्, 'हामी काठमाडौं आएपछि त्रिपुरेश्वर बस्यौं। त्यहाँ एक जना सिजापती थरका मान्छेसँग चिनजान भयो। नाम बिर्सेँ। कृषि कार्यालयको निर्देशक हुनुहुँदो रैछ पहिले। उहाँले नै म बनारसबाट बिए पास गरेर आएको थाहा पाएर 'मैयाँ, जागिर खाने?' भनेर सोध्नुभो।'
त्यो बेला बिए पास गरेका मान्छे नै कति थिए र!
सिजापतीले जागिर प्रस्ताव राख्दा तुला कलकत्ता गएर एमए गर्न ठिक्क परेकी थिइन्। उनलाई राजनीतिमा सानैदेखि रुचि थियो।
'बुबाहरूको रोग लाग्या होला नि,' उनले भनिन्, 'राजनीति नगरे पनि पढ्नुपर्यो भनेर कलकत्ता जान लागेकी थिएँ। भर्ना गर्न चाहिने कागजहरू पठाइसकेकी थिएँ। पछि ती सिजापतीले 'मैयाँ यहाँ जागिर खायो भने छ महिनामा अमेरिका गइन्छ!' भने। अनि अमेरिका जान पाइन्छ भनेर खुसी हुँदै हुन्छ भनेँ।'
उनलाई जागिर खान बोलाएको ठाउँ महिला प्रशिक्षण केन्द्र रहेछ। भर्खरभर्खर सुरु भएको थियो क्यार। त्यहाँ अमेरिकी सहयोग नियोग 'युएसएड' का परियोजना आउँथे। यो प्रशिक्षण केन्द्र त्यहीअन्तर्गत थियो।
बुबाले खुला आँखामा भरिदिएको सपनाले तुलाको जीवन प्रस्तरमा कलात्मक मूर्ति कुँदिएझैं भयो। त्यो समय र मौका अकाट्य थियो। चाहिएको थियो, मात्र संकल्प।
जागिर खाएको एक वर्षमा तुला पुगिन् अमेरिका। २०५० सालतिर समाजमा परिवारका पुरुष सदस्यको स्वीकृतिबिना महिलाले पासपोर्ट लिन पाउँदैनथे। घरबाहिर निस्कन पनि अनेक कुरा सुन्नुपर्थ्यो। तुला अमेरिका जानेबेला ०१६/०१७ सालमा त झन् अवस्था कस्तो थियो होला!
अमेरिका जाने समूहमा उनीसमेत दुई महिला र ४ पुरुष गरी ६ जना रहेछन्।
राजा वीरेन्द्रबाट पदक थाप्दै तुला। तस्बिरः तुलाको पारिवारिक संकलन।
'अमेरिका जाँदा सारा मान्छे हामीलाई पुर्याउन आएका एयरपोर्टमा! त्यो नौलो भयो नि त,' उनले रोमाञ्चित हुँदै सुनाइन्, 'हामी छ जना खुब घुम्यौं।'
'त्यो समयमा त धेरै टाढा थियो होला है अमेरिका? कहाँबाट कसरी गइन्थ्यो?' मैले चासो राखेँ।
उनले मेरो चासो मेटाउँदै भनिन्, 'हामीलाई यहाँबाट कलकत्ता लगे। त्यहाँ ग्राण्ड होटलमा राखे। अमेरिकाको चम्चा, काँटा, 'टेबल म्यानर' बारे बताए। कसरी खानुपर्छ, के गर्नुपर्छ लगायत कुरा। दुई दिनसम्म सिकाए। अनि बम्बईबाट उडाए।'
त्यो बेला उनका आमाबाबु भारतमै थिए। उनी अमेरिका जाने भएपछि कलकत्ताबाट सानो डकोटा प्लेन चढेर पटनासम्म आएका थिए।
'अमेरिका जाने भनेपछि भव्य कुरा हुन्थ्यो नि,' उनले हाँस्दै सुनाइन्।
जति ठूलो कुरा भए पनि त्यसमा रुढिवादी सोच गढेकै थियो। ९० दशकसम्म पनि काठमाडौंका कतिपय कट्टर हिन्दूहरू 'गोरो छाला' भएका व्यक्तिलाई 'म्लेच्छ' भन्थे। घरभित्र नछिराउने र उनीहरूले छोएको नखाने चलन थियो। उनीहरू घरमा छिरे वा छोएको खाइयो भने 'पतिया' गर्थे। अर्थात् भोकै बसेर, गौदान र पण्डितलाई यथेष्ट दान-दक्षिणा दिएर मात्रै 'चोखो' भइने रिवाज थियो।
'तपाईंले पनि आएपछि चोख्याउने गर्नुभो?
'गरिनँ। हामीलाई भन्ने नै कोही थिएनन्,' उनले भनिन्। उनीहरू काठमाडौं बाहिरबाट आएकाले भन्नेहरू कम थिए सायद।
'म अमेरिकाबाट फर्केपछि फुपू भान्जी दिदीको श्रीमान हामीकहाँ आउनुभएको थियो। उहाँ धनी र पोखरामा नाम कहलिएको मान्छे। घर आएका बेला पानी खान दिँदा 'म म्लेच्छको देशबाट आएको मानिसको घरमा पानी खान्न!' भनेर नखाई हिँड्नुभयो।'
अहिले अमेरिका 'सपनाको देश' भनिन्छ, त्यतिबेला 'म्लेच्छको देश'। कस्तो थियो होला?
अमेरिकामा बसेको घरमा एकजनाले 'डु यु ह्याभ टिभी?' भनेर सोध्यो। आफूले टिभी शब्दै नसुनेको। टिबी रोग होला भन्ठानेर डराउँदै नो!नो! भनेँ,' ०१५ सालतिरको आफ्नो अमेरिका भ्रमण अनुभव सुनाउँदै तुला। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
उनी अमेरिका घुम्दाको रोमाञ्चक अनुभव सुनाउँछिन्।
'त्यहाँ एउटा घरमा बस्दा एक जनाले 'डु यु ह्याभ टिभी?' भन्यो। म झसङ्ग भएँ। टिभी शब्दै नसुनेको मैले। टिबी चाहिँ सुनेको थिएँ। त्यही रोगजस्तो लाग्यो,' उनले हाँस्दै सुनाइन्, 'डराउँदै नो! नो! भनेँ। पछि त्यो मान्छेले घरमा भएको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट टिभी ट्याक्क खोल्यो। अनि काँचको पर्दामा चलायमान मान्छे देखियो। म त खुसीले बुरूक्क।'
पहिलोपटक टिभी देख्दा कस्तो लाग्यो त?
'रमाइलो। तर के हो, के हो थाहै छैन। नामै नसुनेको चिज। अहिलेजस्तो पत्रपत्रिकामा देख्ने भए पो थाहा हुन्छ।'
उनीहरू युएसएडको 'एक्सचेन्ज प्रोग्राम' मा गएका थिए। अमेरिकीहरूको रहनसहनबारे जानकारी गराउने कार्यक्रम। क्लबहरूमा लैजाने। तुलाका लागि ती सबै नयाँ थिए। नयाँ ठाउँमा उनी बेलाबेला आत्तिन्थिन्।
'म ती सबै रनघनबाट फर्केपछि घर आएर रुन्थेँ,' उनले सुनाइन्, 'सबै नौलो! फेरि हामी सबैलाई एकै ठाउँमा राखेको थिएन। एक्लै बस्नुपरेको। जाने बेला रुन्थेँ। फर्केने बेला पनि।'
तुलालाई अमेरिका जाँदा जति उत्साह थियो, त्योभन्दा बढी पीडा त्यहाँ केही कुरा नजान्दा भयो। सबभन्दा सकस उनलाई चर्पीको भयो।
'त्यहाँ कम्मोड थियो। कसरी प्रयोग गर्ने थाहै थिएन,' उनले भनिन्, 'म त्यहाँ एक-दुई महिना केही नजानेको गवार भएँ। पछि भने स्मार्ट भइहालेँ।'
अमेरिकाको तौरतरिका अलि बुझ्ने भएपछि उनी गए जति ठाउँका चर्पी हेर्न थालिछन्।
कहीँ गयो कि 'मे आइ गो टु ट्वाइलेट?' भनेर चर्पी हेर्नै मात्र भए पनि हिँडिहाल्थिन्।
अमेरिकामा पहिले-पहिले गोराहरूले काला जातिलाई घरमा काम गर्न राख्थे। मैले उनीसँग त्योबारे जान्न चाहेँ।
'मैले त्यस्तो देखिनँ। रेष्टुरेन्टहरूमा चाहिँ ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट भनेर अलतुला रग्गै ठाउँ छुट्याएको देखेँ। कालाहरू र गोराहरूको बस्ने ठाउँ फरक। कालाहरूकोमा गोरा जाँदैन थिए। गोराहरूकोमा काला नजाने,' उनले भनिन्।
अमेरिकाको अनुभव संगालेर आइसकेपछि तुलाको विवाह आफ्नै विभागमा काम गर्ने पृथुनरसिंह राणासँग भयो। उनीहरू आपसमा प्रेम गर्थे। पृथुनरसिंह त्यही विभागमा जेटिएहरूलाई तालिम दिँदा रहेछन्। उनीहरूको भेट त्यहीँ भएछ।
'बुहारीका रूपमा कस्तो अनुभव रह्यो?' त्यो बेलाका कमै मात्र बुहारी जागिरे हुन्थे। घरकै काममा खटिनुपर्थ्यो। यस्तो अवस्थामा तुला शिक्षित र कामकाजी बुहारी। उनको अनुभव नसुनी बस्न सकिनँ।
'म बिहानै उठेर जागिरमा गइहाल्थेँ। घरमा अरूको खटनपटन केही भएन। बरु मेरै खटन हुन्थ्यो,' उनी भन्दै गइन्, 'फेरि घरमा काम गर्ने मान्छे थिए। सासू-नन्दले पनि काम गर्नुपर्ने थिएन। भात पकाउन बाहुन थिए।'
बिहेपछि १५/१६ वर्षसम्म उनले जागिर खाइन्। त्यसपछि छाडिन्। जागिर छाडे पनि घर बसिनन्। पञ्चायतकालीन महिला संगठनमा लागिन्। संगठनको 'घर-घरमा परिवार नियोजन' नामक परियोजनामा काम गरिन्। त्यो सकिएपछि उनी राजनीतितिर लागिन्।
०३४ सालमा नारी सामाजिक सेवासम्बन्धी परिषद खुल्यो। त्यहाँ ६ वटा समिति गठन भए। नारी, सामुदायिक, महिला, धार्मिक, खेल, युवा तथा बालकल्याण र स्वास्थ्य। नारी समितिमा कमल राणा अध्यक्ष भए। तुला सचिव भइन्।
'कस्तो महशुस भयो त पहिला र पछिको जागिरमा?'
'म अनुभवी थिएँ। मान्छेहरूसँग मेरो सम्बन्ध राम्रै थियो। ठूलाबडासँग कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने थाहा थियो,' उनले भनिन्, 'त्यसैले काम गर्न गाह्रो भएन। गाउँमा झुपडीमा बस्नुपर्थ्यो। तराईका गाउँमा भने गतिलो खानेकुरा पाइन्न थियो। मलाई फोहोरी खाना खायो कि एलर्जी हुन्थ्यो। त्यो एउटा चाहिँ गाह्रो थियो।'
गाउँमा चर्पी हुन्थेनन्। भएका पनि सफा र सहज थिएनन्। जस्तो भए पनि उनी जान्थिन्। अरू कसैले नदेख्ने ठाउँ भए बाहिरै बसिदिन्थिन्। साताको एकपटक नुहाउँथिन्। काम चलिहाल्थ्यो।
'तपाईंले त रानी ऐश्वर्यसँग पनि काम गर्नुभएको हैन? केही व्यक्तिगत अनुभव छ?'
'मैले रानीसँग ८ वर्ष काम गरेँ। बेलाबेला बैठक हुन्थे। सुरुसुरुमा उहाँ एकदमै राम्रो होइबक्सन्थ्यो। सबैको कुरा सुन्ने। पछिपछि चाहिँ कसैको कुरा नसुन्ने। कुनै कुरामा मतभेद राख्न नपाइने। उहाँ 'नो' सुन्नै नसक्ने होइबक्सन्थ्यो,' उनले थपिन्, 'उहाँको कुरामा कसैको कुरा बाझिनु हुँदैन थियो।'
उनी महिला संगठनमा चुनाव लडेर सचिव भएकी थिइन्। बहुदल आएपछि सबै खारेज भयो। राप्रपा खुल्यो। राप्रपामा उनले चिनेका मान्छे थिए। उनी राप्रपामै संलग्न भइन्।
यही सिलसिलामा उनको भेट गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग भयो। उनले आफूलाई भूपेन्द्रविक्रम शाहकी छोरी भनेर चिनाइन्।
'बुबा कांग्रेस भएकाले गिरिजाले अब कांग्रेसमा आउनू भन्नुभएको थियो। कांग्रेसमा कोही चिनेको थिएन। म राप्रपामै बसेँ,' उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुनाउँदै भनिन्, 'राप्रपामा लाग्दा धेरै मान्छेले मलाई 'ए तुलाजी, तपाईंको श्रीमान सचिव, तपाईं चाहिँ राप्रपामा जाने?' समेत भने।' तुलाका श्रीमान तत्कालीन श्री ५ को सरकारका सचिव थिए।
यसरी प्रश्न गर्नेलाई उनले जवाफ दिइछन्, 'प्रजातन्त्र भनेको यही त हो नि! आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न पाउने। आफूलाई मन लागेकामा सहभागी हुने।'
बहुदल आएको डेढ वर्षपछि तुलाका श्रीमानले अवकाश पाए। तुला राप्रपा राजनीतिमा सक्रिय भइन्। राप्रपाले टिम बनाएर उनीहरूलाई जिल्ला-जिल्ला पठायो। उनीहरूको छ जनाको टोलीमा रेणु यादव पनि थिइन्। उनीहरू तौलिहवा, नवलपरासी, भैरहवा, गुल्मी पुगे।
'गुल्मीबाट भने टिममा संलग्न मधेसी मूलका साथीहरू अगाडि जान सकेनन्। हामीलाई पर्वत, बाग्लुङ र म्याग्दी जानु थियो,' उनले अनुभव सुनाइन्, '६ जनाको समूहमा बाग्लुङ र म्याग्दी जाने म र दाङको एक जना साथी मात्र भयौं।'
'राजनीतिमा कुर्सी तानातान मात्र। दिक्क लागेर छाडेँ। अचेल घरमै अध्यात्म, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनमा व्यस्त हुन्छु,' ८२ वर्षीया तुला भन्छिन्। तस्बिरः नारायण महर्जन/सेतोपाटी
'राप्रपा छाड्नुभयो नि?'
'धेरै भइसक्यो नि। म पार्टीमा कुनै शक्तिका लागि गएकी थिइनँ। पैसा कमाउन पनि होइन। काम गर्न हो। म राप्रपामा महिला संघको अध्यक्ष थिएँ। आफूले जानेबुझेका कुरा अरू दिदीबहिनीसँग बाँडौं भनेर गएकी थिएँ। महिलाहरूका लागि केही गर्नुपर्छ भनेर। तर पार्टीमा खाली कुर्सीको हारालुछ मात्र भयो। नेताहरू खाली लड्ने। हामीले भने आफ्नो मिहिनेत, दिमाग र पैसा खर्च गर्नुपर्ने। हात लाग्यो सुन्ना। केही नहुने देखेपछि यस्तोमा नबस्नु नै जाति भनेर राजीनामा दिएँ। अनि कुनै पार्टीमा गइनँ।'
'त्यस्तो सशक्त मान्छे अचेल किन यस्तो?'
'अब सक्दिनँ नि। मोबिलिटी छैन। ८३ वर्ष भएँ। फेरि यताउता जना गाडी चालक छैन। पहिले श्रीमान हुँदा पुर्याइदिने, लिन आउने गर्नुहुन्थ्यो,' उनले भनिन्, 'छोराहरूको मोटर छ। तर उनीहरूको आफ्नै कार्यक्रम हुन्छ। मलाई सधैं लैजान-ल्याउन भ्याउँदैनन् नि।'
आजकाल तुला राणाको जीवन शान्त छ। अध्यात्म, पत्रपत्रिका र टेलिभिजनका पर्दामा आँखा टेकाएर महाराजगञ्जको पहेँलो घरमा जीवन व्यतित गरिरहेकी छन्।
परिवारको साथमा तुला। तस्बिरः तुलाको पारिवारिक संकलन।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज २, २०७५